जनताको अभिमतबाट प्रतिगमनलाई परास्त गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ, हामीलाई हार्न छुट छैन र हामी हार्दैनौँ : रेनु दाहाल | Safal Khabar
'जगन्‍नाथजीले देशको आवश्यकता बुझ्नुभएन, उहाँको उमेदवारीले असर गर्दैन'
मंगलबार, २० बैशाख २०७९, ०९ : १९
भरतपुर महानगरपालिका मेयरमा दोस्रो कार्यकालका लागि उमेदवारी दिएकी नेकपा (माओवादी केन्द्र)की रेणु दाहाल यतिबेला चुनावी प्रचारप्रसारमा व्यस्त छिन् । सत्ता गठबन्धनका दलबाट साझा उमेदवार बनेकी उनी जनतामा एक पटक परीक्षण भइसकेकी जनप्रतिनिधि हुन् । चुनावी तयारीको सन्दर्भमा रहेर मेयरकी उमेदवार रेणु दाहालसँग गरेको कुराकानी–
१. चुनावको तयारी र प्रचारप्रसारका लागि घरदैलोमा हिँडिरहनु भएको छ । कस्तो प्रतिक्रिया पाउनु भएको छ ?
३. प्रचण्डकी छोरी भएकैले तपाईंले धेरै अवसर पाएको भन्‍ने गर्छन् नि । यसमा तपाईंको भनाइ के छ ?
तत्कालीन अवस्थामा राज्यपक्षबाट प्रधानमन्त्री नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरीजाप्रसाद कोइराला र विद्रोही पक्षबाट नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ हुनुहुन्थ्यो । हामीहरु यहाँसम्म आएका छौँ । संविधान जारी गर्‍यौँ । यी सबै परिवर्तनका हिमायती हामी हौँ । परिवर्तनको विरोधी राप्रपालाई बोकेर एमाले हिँडिरहेको छ ।
उहाँ परिवर्तनको पक्षधर हुनुभएन । हामी बाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन भनेका छौँ । २०७४ मा भएको चुनावमा भरतपुर महानगरपालिकामा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसबीच गठबन्धन भएको थियो । अहिले त झन् हामी पाँच वटा पार्टी छौँ । बलियो छौँ । पटक-पटकको प्रतिगमनबाट विजय भएर हामी यहाँसम्म आएका छौँ । अब जनताको अभिमतबाट पनि त्यो प्रवृत्तिलाई परास्त गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता भएको छ । हामीलाई हार्न छुट छैन र हामी हार्दैनौँ ।